Tuesday October 09, 2018 - 11:49:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay ayuu warbaahinta xog muhiim ah ka sheegay Ninkii Mas'uulka ka ahaa in Mukhtaar Rooboow uu isku dhiibo ciidamada Itoobiya ee magaalada Xudur Bishii Agoosto ee sanaddii 2017.
Cabdi Rashiid Cabdullaahi Maxamed oo ahaa wasiirkii Gaashaandhigga Dowladda Federaalka ayaa wareysi uu siiyay idaacadda Codka Mareykanka laanteeda Afka Soomaaliga wuxuu uga hadlay sababta keentay in Hoggaanka Villa Somalia ay kasoo horjeestaan is sharrixidda Mukhtaar Rooboow ee xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo qaabkii uu Rooboow uga baxay Al Shabaab.
Ugu horrayn wuxuu sheegay in dadaalladii gogolxaarka u ahaa isdhiibiddiisa ay ka horreeyeen dowladda Kheyre iyo Farmaajo madaxda ka yihiin ayna jireen wadahadallo ay beesha caalamka kula jirtay Mukhtaar Rooboow isagoo ku sugan dhulka Al Shabaab ka maamusho gobollada Bay iyo Bakool.
"wadahadalladii Sheekh Mukhtaar waa ka horreeyay dowladda ay madaxda ka yihiin Farmaajo iyo Kheyre oo aniga ayaa howshaan soo waday muddo lix sana ka hor ah xilligii aan ahaa Guddoomiyaha gobolka Baay" ayuu yiri Cabdi Rashiid Cabdullaahi Maxamed wasiirkii hore ee Gaashaandhigga DF-ka.
Sababta dowladda Federaalka ay Mukhtaar Rooboow ugu diidantahay in uu u tartamo xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed ayuu ku tilmaamay in madaxda dowladdu aysan Rooboow wadanin wuxuuna Villa Somalia ku eedeeyay in ay ka baxday ballamihii lalagalay Mukhtaar Rooboow balse masheegin ballamahaas waxa ay ahaayeen.
Warar horay ugusoo dusay warbaahinta ayaa sheegayay in Farmaajo uu Mukhtaar Rooboow udiiday dhisidda Maleeshiyo qaab beeleed u abaabulan oo gobollada Bay iyo Bakool uu ka aruursado kadibna uu kula dagaallamo Xarakada Al Shabaab.
Rooboow ayaa doonayay in maleeshiyaad isaga umadax banaan loo qalabeeyo kadibna uu kula dagaallamo Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxaana jiray khilaaf dhanka maamulka ah oo kala dhaxeeyay madaxda dowladda Federaalka, illaa iyo hadda macadda mustaqbalka siyaasadeed ee Rooboow mar haddii laga diiday in uu utartamo xilka madaxtinimada 'Koonfur Galbeed'.
Halkan ka dhageyso Wareysiga Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga MP3
Maxkamad 12 sano oo xarig ah ku xukuntay R/wasaarihii hore ee Malaysiya.
Wasiir isku day dil ka badbaaday iyo saldhigga ciidanka Itoobiya ee Halgan oo weerar lakulmay.